Onye e tere mmanụ izi ozi ọma (1-11)
“Afọ Jehova na-emere ndị mmadụ amara” (2)
“Nnukwu osisi nke ezi omume” (3)
Ndị ala ọzọ ga-abịa nye aka (5)
“Ndị nchụàjà Jehova” (6)
61 Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova nyere m mmụọ ya,+N’ihi na Jehova tere m mmanụ izi ndị dị umeala n’obi ozi ọma.+ O zitere m ka m kechie ọnyá ndị obi gbawara,Ka m gwa ndị e ji eji na a hapụla ha,Ka m meghee anya ndị mkpọrọ,+ 2 Ka m kwusaa afọ Jehova na-emere ndị mmadụ amara*Na ụbọchị Chineke anyị ga-akwụ ndị iro ya ụgwọ,+Ka m kasie ndị niile na-eru uju obi,+ 3 Ka m lekọta ndị na-eruru Zayọn uju,Ka m nye ha ákwà isi ha ga-eji dochie ntụ,Ka m nye ha mmanụ ka ha na-enwe aṅụrị kama iru uju,Ka m nye ha ákwà ha ga-eyiri na-eto m kama ịda mbà n’obi. Ndị mmadụ ga-akpọkwa ha nnukwu osisi nke ezi omume,Nke Jehova kụrụ ka e jiri maka ya na-eto ya.*+ 4 Ha ga-arụghachi ebe ndị e bibiri ebibi dịwara kemgbe ụwa. Ha ga-arụ ebe ndị tọgbọ nkịtị n’oge ochie.+ Ha ga-eme ka obodo ndị e bibiri ebibi dị ọhụrụ,+Ya bụ, obodo ndị tọgbọ nkịtị malite n’otu ọgbọ ruo n’ọgbọ ọzọ.+ 5 “Ndị ala ọzọ ga-abịa na-azụ ìgwè ewu na atụrụ unu. Ndị mba ọzọ+ ga na-akọrọ unu ubi unu, na-elekọtakwa ubi vaịn unu.+ 6 Ma, ha ga-akpọ unu ndị nchụàjà Jehova.+ Ha ga-asịkwa na unu bụ ndị ozi Chineke anyị. Unu ga-eri akụ̀ mba dị iche iche.+ Unu ga-ejikwa ebube* ha na-eme ọnụ. 7 E menyere unu ihere. Ma ugbu a, unu ga-enweta ngọzi okpukpu abụọ. A gaghịzi emenye ndị m ihere, kama, ha ga na-eti mkpu ọṅụ n’ihi na a gọziela ha. N’eziokwu, ha ga-enweta ngọzi okpukpu abụọ n’ala ha.+ Ha ga na-aṅụrị ọṅụ ruo mgbe ebighị ebi.+ 8 N’ihi na mụnwa, bụ́ Jehova, hụrụ ikpe ziri ezi n’anya.+ M kpọrọ izu ohi na ajọ omume asị.+ M ga na-akwụ ndị m ụgwọ ọrụ ha. Mụ na ha ga-agbakwa ndụ ga-adịru mgbe ebighị ebi.+ 9 Ụmụ* ha ga-abụ ndị a ma ama ná mba dị iche iche.+ Ndị si n’ezinụlọ ha ga-abụkwa ndị a ma ama n’obodo niile. Onye ọ bụla hụrụ ha ga-amata ha,Matakwa na ha bụ ụmụ* Jehova gọziri agọzi.”+ 10 M ga-aṅụrị ezigbo ọṅụ n’ihi Jehova. Obi ga-abụ m* sọ aṅụrị n’ihi Chineke m.+ N’ihi na o yikwasịla m nzọpụta ka uwe.+ O yikwasịla m ezi omume ka uwe,Otú nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ si eke ákwà n’isi ka onye nchụàjà,+Nakwa otú nwaanyị a na-alụ ọhụrụ si eji ihe ndị o ji achọ mma chọọ onwe ya mma. 11 Ọkaakaa Onyenwe anyị JehovaGa-eme ka mba niile na-eme ezi omume,+ na-etokwa ya.+ Ọ ga-eme ihe ndị a otú ahụ ala si eme ka mkpụrụ puoNakwa otú ahụ ubi si eme ka ihe a kụrụ na ya puo.
^ Ma ọ bụ “na-egosi ndị mmadụ ihu ọma ya.”
^ Ma ọ bụ “iji chọọ onwe ya mma.”
^ Ma ọ bụ “akụnụba.”